Sakafo alika hypoallergenika | Tontolo alika
Sakafo alika hypoallergenic
Ny sakafo alika hypoallergenic dia karazan-tsakafo manokana ho an'ireo biby ireo, na dia tsy ho an'ny rehetra aza, fa fotsiny, ohatra, ho an'ireo izay mety manana olana amin'ny fandevonan-kanina sakafo sasany. Zava-baovao izy io, izay tsy nisy ny taona vitsivitsy lasa izay.
Amin'izay mba, Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny sakafo alika hypoallergenic tanteraka isikaOhatra, holazainay aminao ny momba azy, ny fomba fiasa ary ny marika iza no be mpitia indrindra. Raha te hahalala bebe kokoa momba ny feed ianao dia avelanay ho anao ity lahatsoratra mahaliana ity Sakafo alika 7 tsara indrindra.
1 Alergia sy tsy fahazakana, dingana voalohany amin'ny filàna sakafo hypoallergenic
1.1 Inona no mahazatra indrindra
1.2 Fambara famantarana ny tsy fahazakana sy tsy fahazakana
2 Inona no atao hoe sakafo hypoallergenic?
2.1 Ahoana ny fiasan'ny sakafo hypoallergenic
2.2 Fampiasana hafa ny sakafo hypoallergenic
2.3 Rahoviana no hanome sakafo alika hypoallergenic ny alika
2.4 Ahoana no hahalalana izay heveriko fa mahatsapa tsara kokoa
2.5 Karazana sakafo hypoallergenic
2.6 Aiza no hividianana sakafo hypoallergenic
Alergia sy tsy fahazakana, dingana voalohany amin'ny filàna sakafo hypoallergenic
Voalohany indrindra, andao hiresaka kely momba ny tsy fahazakana alika sy alika amin'ny alika, satria, toy ny ananantsika tsy fahazakana gluten na lactose, na ny fananana allergy amin'ny sakafo manokana, dia mety hitranga amin'ny biby fiompintsika ihany koa.
Noho izany, ny mahazaka dia valin'ny hery fiarovan'ny vatana amin'ny alèzena, amin'ity tranga ity, ny proteinina izay heverin'ny vatana ho singa manimba. Etsy ankilany, ny tsy fahazakana sakafo dia valiny ara-batana tsy ara-batana amin'ny vatana, toy ny fahamamoana na ny tsy fisian'ny anzima izay miteraka singa iray manokana tsy azo levonina tsara.
Inona no mahazatra indrindra
Ny sakafo mamokatra be loatra ny allergy na tsy fahazakana dia matetika omby, zanak'ondry, akoho, atody na gluten. Etsy ankilany, tsy maintsy raisina fa ny biby fiompintsika dia mety miteraka tsy fandeferana na alikaola amin'ny taona rehetra, midika izany fa mety efa taona maro tamin'io sakafo io ihany ary amin'ny fotoana iray dia manomboka mahatsapa ho ratsy izy. Ilaina ihany koa ny manamarika fa misy karazana izay mora tohina kokoa noho ny hafa, toy ny West Highland White Terriers, Cocker Spaniels, ary Irish Setters.
Fambara famantarana ny tsy fahazakana sy tsy fahazakana
Imbetsaka ireo vokany ireo dia lasa olana amin'ny gastrointestinal toy ny fivalanana, ny fandoavana, ny fanaintainan'ny kibo na ny aretin-kibo; na noho ny olan'ny hoditra toy ny mangidihidy sy ny lokon'ny hoditra, na ny fihenan'ny volo.
Ny zavatra manahirana dia ny, toy ny indraindray misy fotoana mora ahatsapana fa misy ny olana, toy ny amin'ny mandoa na mivalana, misy fotoana hafa izay tsy dia mora loatra. Ohatra, ny tranga mangidihidy dia soritr'aretina sarotra tsikaritra, satria ny alika dia mikorisa indraindray, mandehandeha ary milelaka azy ireo voajanahary, nefa tsy voatery ho olana amin'ny tsy fahazakana na tsy fandeferana.
Inona no atao hoe sakafo hypoallergenic?
Ankehitriny rehefa niresaka lalina momba ny tsy fahazakana sy tsy fahazakana isika, dia azontsika atao ny mamaritra tsara hoe inona io karazan-tsakafo io. Araka izany, lNy sakafo hypoallergenic ho an'ny alika dia karazan-tsakafo natao manokana ho an'ireo alika izay mijaly amin'ny iray amin'ireo allergy na tsy fahazakana ireo amin'ny sakafo sasany.
Ahoana ny fiasan'ny sakafo hypoallergenic
Ny marika dia mifototra amin'ny fitsipika telo hamoronana ny hypoallergenic feed. Voalohany, voafetra ny isan'ireo fangaro ary ny loharanom-pahalalana lehibe sy ny tsy fahazakana dia esorina, toy ny vokatra vita amin'ny ronono, serealy misy gluten na loharanom-proteinina hena.
Faharoa, zatra ihany koa izy ireo hydrolyze proteinina, izay midika fa ny proteinina izay mamokatra ny réaction dia mizara ampahany kely kokoa, izay mahatonga ny hery fiarovan'ny vatana tsy hanaiky azy ho alergen.
Ary farany, izy ireo koa dia nisafidy ny hanisy akora vaovao, toy ny henan-kery, satria tsy azo inoana fa nifandray tamin'io biby io ny biby fiompintsika taloha ary tsy namokatra antiôbôgy izay mahatonga allergy. Ho fanampin'izay, marika mahaliana tato ho ato toa an'i Bellfor no nanampy ny vokatra vokariny sakafo mifototra amin'ny bibikely hypoallergenic, izay mahagaga, na dia mbola lojika aza izy io, satria loharanom-proteinina lehibe ireo, izay mazava ho azy fa tsy miteraka karazana tsy fandeferana.
Fampiasana hafa ny sakafo hypoallergenic
Ny sakafo alika hypoallergenic dia tsy ampiasaina amin'ny fitsaboana alikaola na tsy fahazakana ihany. Satria mora mandevon-kanina koa izy ireo dia ampiasaina hitsaboana ny karazan-aretina mikraoba rehetra. Tsara homarihina ihany koa fa tsy ny sakafo rehetra dia mitovy, ary ny mitovy amin'izany dia mitranga amin'ireo hypoallergenic. Tena azo atao tokoa fa ny iray amin'ireny sakafo alika hypoallergenic ireny dia mety tsy hipetraka tsara amin'ny biby fiompintsika, izany no antony maha-zava-dehibe ny torohevitry ny mpitsabo antsika.
Rahoviana no hanome sakafo alika hypoallergenic ny alika
Miezaka foana izahay manao izay heverinay fa mety indrindra amin'ny biby fiompinay, fa indraindray tsy mila manatona mpitsabo biby. Noho izany, na dia toa miharihary aza izany, alohan'ny hanomezana ity karazana alika hypoallergenic ity ho an'ny biby fiompinay, araka ny nolazainay, ilaina ny manatona azy amin'ny manam-pahaizana manokana, satria ianao dia hanana fampahalalana bebe kokoa momba ilay lohahevitra noho izahay ary ho afaka hanome torohevitra tsara anay momba izay mety hahasoa ny biby fiompinay.
Ahoana no hahalalana izay heveriko fa mahatsapa tsara kokoa
Ny fitsidihana ny mpitsabo dia tsy zava-dehibe fotsiny ny mahita izay heveriko fa azontsika omena ny alika, fa koa Ilaina ihany koa ny mahita izay allergy na tsy fandeferana anananao, izay tratra amin'ny alàlan'ny fitsapana ra. Manomboka eto, ny matihanina dia hanome torohevitra antsika momba ny sakafo tsy misy proteinina mahatonga ny tsy fandeferana ary azo inoana fa hampirisika anao hampiditra azy io amin'ny sakafon'izy ireo ary hitandrina sao mbola ratsy foana ny fahasalamany.
Karazana sakafo hypoallergenic
Ny mpanjaka saka saka alika hypoallergenic, tsy isalasalana, no fahan-kanina. Ity vokatra ity dia iray izay manolotra karazana marika sy tsiro indrindra, koa azo antoka fa hahita izay tsy dia tsara aminao fotsiny izahay fa tiako koa.
Ankoatra ny fahana, izay araka ny efa nolazainay fa ny karazan-tsakafo hypoallergenic miely indrindra, ny kapoaka miaraka amin'ity karazan-tsakafo ity dia amidy ihany koa, izay mamela anao hiovaova kely. Na dia zava-dehibe aza ny mahatadidy fa ny zava-dehibe dia tsy ny karazan-tsakafo loatra ka azontsika atolotra ny alikanay fa manandrana misoroka ny singa izay miteraka olana. Midika izany fa, ohatra, raha fantatray fa tsy mahazaka hen'omby ianao, dia afaka manome zava-mamy na sakafo hafa izay tsy vita amin'ny hen'omby.
Aiza no hividianana sakafo hypoallergenic
Amin'ny maha karazana sakafo tena manokana anao, tsy misy amin'ny sehatry ny varotra lehibe izany, ka mila manadihady kely ianao.
Ohatra, tena soso-kevitra izany fivarotana fahana manokana, toa an'i Bellfor, izay ahitanao ny karazany rehetra amin'ny marika sy ny vokatra mety hahaliana anao sy ny alikanao. Io no soso-kevitra indrindra raha tianao ny marika manokana.
Safidy iray hafa ny misafidy fivarotana biby an-tserasera toa an'i Kiwoko na TiendaAnimal. Matetika izy ireo no manana fahana bebe kokoa amin'ny magazay an-tserasera noho ny amin'ny kinova ara-batana, na dia mety mahasoa aza ny fitsidihana ity farany raha te hahita ny fahana manokana ianao.
ny mpitsabo biby Iray amin'ireo toerana hahitanao ity karazan-tsakafo manokana ity izy ireo. Iray amin'ireo toerana tsara indrindra izy ireo raha mila torohevitra matihanina ianao.
Farany, Amazon ary ny orinasa hafa mitovy amin'izany dia mazàna manana karazana kely, na dia manana vidiny lafo sy fandefasana aza tafiditra ao anatin'ny safidiny voalohany, ohatra.
Ny sakafo alika hypoallergenic dia tena ilaina ho an'ny tompona biby miaraka amin'ireo soritr'aretina ireoNa dia, mazava ho azy, tsy maintsy mitsidika mpitsabo vetivety foana ianao. Lazao anay fa tianao ve ny biby fiompinao? Inona no marika tian'ny alikao? Tadidio fa azonao atao ny milaza aminay ny zavatra tadiavinao amin'ireo hevitra ireo!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fahano alika sy alika kely » Sakafo alika hypoallergenic
Ahoana ny fomba hisafidianana ny Kong ho an'ny alikako